Zuva reBhuku: akakosha mabhuku ekuverenga | Zvazvino Zvinyorwa
Nhasi ndi Kubvumbi 23, iro zuva rebhuku uye vazhinji vane tsika yekutenga bhuku musi iwoyo, ingave yedhijitari kana pepa. Kana iwe uri mumwe weavo vanofarira kuverenga uye usati wane ziso rako pane chero bhuku, saka ngatikurudzirei mamwe emabhuku akakosha kuverenga.
Kune izvi, isu takatora mabhuku kune wese munhu, makuru, epakati nepadiki nekuti isu tinofunga anogona kuve akakwana ekutsvaga vatsva vanyori uye nyaya. Ndeapi auchachengeta?
1 Akakosha mabhuku ekuverenga pazuva rebhuku
1.2 Zuva reBhuku: Aquitania, Eva García Sáenz de Urturi
1.4 Zuva reBhuku: Camp, Blue Jeans
1.5 Mambokadzi Ari Oga, Jorge Molist
1.6 Zuva reBhuku: Mwoyo Pakati Pako Newe neni, Megan Maxwell
1.7 Kubika kwakanaka. 900 mabikirwo anogara achibuda zvakanaka, Karlos Arguiñano
1.8 Bhuku Rezuva: Iyo Midnight Raibhurari, Matt Haig
1.9 Iwe uri anonakidza kuve! Sophie Linde
1.10 Zuva reBhuku: Iyo Mweya Mutambo, Javier Castillo
Akakosha mabhuku ekuverenga pazuva rebhuku
Zuva rebhuku iyi ndeimwe yenguva apo zvinyorwa zvinorarama zuva rayo guru. Zvisinei nezvose, kune vazhinji vanoziva kushandisa matekinoroji matsva kusimudzira kuverenga zuva rino, kunyangwe kana risingakwanise kuitwa panyama sezvazvakaitika mune mamwe makore. Saka imwe nzira yekubhadhara mutero kubhuku zuva ndeyekutenga imwe. Asi kune mamirioni mumusika, saka pano tiri kuzokusiya iwe imwe kusarudzwa kweavo vatakafunga kunofanirwa kuve mune raibhurari yako.
Yekutanga kurudziro yebhuku yezuva rebhuku iyo yatinoita kwauri ndeiyi kubva kuna Juan del Val. Uye tinozviita nekuti nhau dzichangobva kuzivikanwa izvo ichachinjiswa kuita nhepfenyuro yeterevhizheni. Saka vasati vaiburitsa, zvaisazokuvadza kana iwe ukaverenga bhuku racho, kuti iwe ugone kuziva kana vanga vakatendeka kunyaya kana kwete.
Kana iri yezano, tinozviwana tiri munzvimbo, Delparaíso, iyo yakachengeteka, yakasarudzika uye yakachengetedzwa maawa makumi maviri nemana pazuva. Asi manzwiro ane nzvimbo munzvimbo ino uye, dzimwe nguva, hazvisi izvo zvinotarisirwa nemunhu.
Zuva reBhuku: Aquitania, Eva García Sáenz de Urturi
Iri bhuku rakasimudzwa pamwe ne Planet Mubairo 2020 uye avo vakarava vakasiya ratidziro dzeshungu pamusoro payo. Icho chimwe chinhu chenhoroondo, nekuti ichatiisa mugore ra1137, nenyaya yaDuke weAkitaine uye panguva imwechete inonakidza nhoroondo izere nekutsiva, hondo uye makunakuna. Kana iwe uchida iyi mhando yenyaya unogona kuitarisa pazuva rebhuku.
SIRA (Vanyori veSpanish ...
María Dueñas anga asati aburitsa bhuku kwenguva yakareba, saka iyi, sechinhu chitsva chebhuku rebhuku, pamwe ndechimwe chezvakakosha kana iwe uchida munyori.
Mariri iwe uchave se protagonist mukadzi uyo, mushure meHondo Yenyika II, inofanirwa kuzvivandudza uye rega kuva mubatsiri iyeye weBritish Chakavanzika Services kuti uve chimwe chinhu. Asi muchii?
Zuva reBhuku: Camp, Blue Jeans
Musasa ((Kunze ...
Bhuruu Jeans inozivikanwa pasi rese semunyori wechidiki. Asi imwe nguva yapfuura Akatishamisa neThe Invisible Girl, chinonakidza chizere nehukasha. Uye zvino anodzokorora neichi chinyorwa chinyorwa.
Mukamba umu ticha tsvaga nyaya yeboka revakomana vari pasi pemakumi maviri nematatu vakakokwa kukamba yakakosha. Chinangwa ndechekuti mumwe wavo ave murume wekurudyi wemirionea (uye agadzirise hupenyu hwake hwese): Dambudziko nderekuti, kamwe kamwe, varongi vanonyangarika uye mumwe wevakomana anofa. Uye zvimwe zvacho hazvina kuchengetedzeka. Asi nei?
Mambokadzi Ari Oga, Jorge Molist
Mambokadzi ega (Vanyori ...
Iwe unofunga here kuti munhoroondo makange musina vanhukadzi vatambi vakaita zvinhu zvikuru? Zvakanaka mune ino kesi wakakanganisa, nekuti iwe uchaenda kunotsvaga iyo nyaya yemambokadzi achangopfekedzwa korona, asina ruzivo, uye asina murume, kuti anofanirwa kutarisana neavo vari kuedza kutora umambo hwake.
Sezvavanonyevera mubhuku, inyaya yakachinja magumo eSpain nesimba reMediterranean.
Zuva reBhuku: Mwoyo Pakati Pako Newe neni, Megan Maxwell
VaMaxwell Warriors, 6 ....
Megan Maxwell ndomumwe wevanyori vanobudirira kwazvo veSpanish, kunyanya mumhando yerudo. Nekudaro, pane saga yaasina kusiya uye iyo vazhinji vakatanga kumuziva (pachokwadi, "varwi", sekudana kunoita munyori vateveri vake, anobva mumabhuku aya).
Izvi kunyanya iri rechitanhatu musaga, iro rinogona kuverengwa rakazvimiririra. Mariri tichagara iyo Harald Hermansen nyaya, murume ane "madhimoni uye zvishuwo" zvake anotsvaga kusiya zvakapfuura agamuchire zvazvino neramangwana.
Kubika kwakanaka. 900 mabikirwo anogara achibuda zvakanaka, Karlos Arguiñano
Chikafu chakanaka: 900 ...
Kubika kwaive kumwe kwekuzvivaraidza kwakaponesa vazhinji muhusungwa nekuda kwekonavirus. Uye kuswedera padyo nekicheni, uye kugadzira chikafu chedu pachedu, sezvakaitwa naambuya vedu nasekuru-mbuya, zvaita kuti vanhu vazhinji vashinge kuramba vachidaro.
Asi chokwadi, mapepa anodiwa, saka Karlos Arguiñano, mumwe wevakuru vanozivikanwa kwazvo muSpain, akaunganidza mazana mapfumbamwe emabikirwo saka une zvakawanda zvekubika kwemakore mashoma.
Bhuku Rezuva: Iyo Midnight Raibhurari, Matt Haig
Vanhu vanoti, Pakati pehupenyu nerufu, pane raibhurari izere nemashefu ane mamirioni emabhuku. Izvi zvinobvumidza munhu kuyedza humwe hupenyu hwaungadai wakararama uye nekudaro iwe unoziva chii chingadai chakashanduka dai iwe waita dzimwe sarudzo. Ikoko kunoonekwa Nora Mbeu, uye ine mukana wekuchinja. Asi ko kana izvozvo zvikaisa njodzi Raibhurari pachayo?
Iwe uri anonakidza kuve! Sophie Linde
Uri chinhu ...
Iri bhuku rakakwana kune vadiki vari mumba. Kubva pamakore matanhatu iwe unogona kuverenga uye mairi vanowana chishandiso chekubata nacho manzwiro avo uye kudzidza kuzvivimba.
Chii chavachawana? Wana chivimbo, kukurira kutya, kukudziridza kuziva uye kuziva neari mavara
Zuva reBhuku: Iyo Mweya Mutambo, Javier Castillo
Mutambo wemweya (SUMA)
Javier Castillo ndomumwe wevanyori vanoverengerwa zvakanyanya muSpain nekuda kwenzira yaanorondedzera, kupi sanganisa zviripo uye zvekare pasina kushatisa. Nhau dzake, dzizere nekunyongana uye kufungira, chengeta muverengi akanamira pakati pemapeji ake kusvika kwekupedzisira, uye magumo aanogadzira haafano fungidzike, ayo anokosheswa nevaverengi vanonyanya kuda.
Muchiitiko ichi, iyo nyaya inotarisana nerufu rwemusikana ane makore gumi nemashanu.
Uye zviripo mazana nemazana emabhuku ezuva rebhuku izvo zvatingakurudzira. Chinhu chakakosha kuti ude kuverenga kuverenga, pasina mubvunzo, kuwana iro bhuku rinorova kiyi yekukufadza iwe nekuita kuti iwe ude mabhuku senge kufema.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Zuva rebhuku: mabhuku akakosha ekuverenga
Silvia Aguilar chinobata mufananidzo akadaro
Ndinoda kukurudzira bhuku «Chiedza chekushuvira nedzimwe nyaya» naMiguel Ángel Linares. Iri rakanaka bhuku rerudo renhau pfupi uye vega vanhu vari kutsvaga mufaro. Izvo zvakare zvinosanganisira mitsara, kufungisisa uye aphorisms izvo zvinoita kuti iwe ufunge nezve ndima kubva kuhupenyu hwako. Yakakurudzirwa !!
Pindura Silvia Aguilar